Ao ireo tena resin-tory miesona mihitsy, ny sasany miteny irery efa midelira, hoy ny mpitazana . Misy tafafoha ihany afaka ora iray na roa dia mody. Misy moa dia hita tra-maraina tsy tafody mihitsy. Ao ny voaendaka ary ny mampalahelo aza dia misy koa ny mety mamoy ny ainy mihitsy noho ny hamamoana diso tafahoatra sy ny hatsiaka ary ny orana. Aiza ireo tompon’andraikitra ary inona marina no fepetra raisiny ? Tsy efa mampivarahontsana sy tokony handraisana fanapahan-kevitra ve ny fandrenesana ireny fanadihadiana manambara ireny fa anisan’ireo firenena tompondaka amin’ny fisotroana sy fanjifana toaka ny Malagasy ?